China 140cm silipo lehilahy saribakoly fiainana mitatra habe amin'ny olon-dehibe kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny pelaka zazalahy silika sombin-dehilahy lahy ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy | Shaoman
Saribakoly silipo 140cm an'ny olona manerantany amin'ny haben'ny fiainana olon-dehibe kilalao kilalao ho an'ny pelaka zazalahy silikonilahy lahy sy vavy ho an'ny vehivavy
hahavony 140cm valahana 79cm filahiana 16-18cm
vozony 22cm hiomana 58cm Anus lalina 14cm
-tsorony 32cm Rofia 17cm Lanja afa-karatsaka 30.5kg
Tratra ambony 73cm Tongotra 74cm Lalina am-bava 12cm
Tratra ambany 67cm Tongotra 21cm andilany 61cm
Famaritana ny saribakoly lahy lahy 140cm:
Tsy tantera-drano, mora diovina, diovina amin'ny savony alohan'ny hampiasana azy voalohany.
Tunnel anatiny anatiny 3D, tena misy.
Hoditra malefaka: fitaovana TPE fitsaboana tsara kalitao.
Ny saribakolinay dia noforonina tamin'ny ampahany sy ny simetran'ny vatan'olombelona, ​​toa olombelona hafa.
1. Alohan'ny hampiasana dia azonao atao ny mampiditra ny tehina fanafanana aloha mba hafanana, raha sanatria misy hafanana be loatra, aza mihoatra ny 25 minitra.
2.Mba mampiasa diloilo sy fimailo miorina amin'ny rano rehefa tianao ny saribakoly.
3.Ataovy antoka fa mahazaka famindrana loko ny fitafiany, na ho sarotra be ny manadio azy.
4. Aza aseho amin'ny masoandro mandritra ny fotoana maharitra ny saribakolinao mba hisorohana ny fahanterana ara-nofo.
5. Diovy tsy tapaka amin'ny vatan'ny savony sy rano mafana ny vatana.
6. Atsofohy ny lamba famaohana ary aza mampiasa fanamainana volo satria mety hanimba izany.
7. Mitandrema rehefa mamindra ny saribakoly, aza miala / mandondona / vaky.
8.Ny saribakoly fitiavanao dia tsy avela hanana savily feno amin'ny lafiny samihafa.
9. Aza avela eo amin'ny toerana mitovy amin'izany ela loatra izy, ary tsy avelanao handry mandritra ny fotoana lava akory izy.
10. Misy taolana vy natsofoka tao anatiny, izay mahatonga azy ho tena mahay mandanjalanja, saingy manoro hevitra anao izahay tsy hanao sary sarotra loatra, manimba ny hoditry ny saribakoly sy ny taolam-paty io.
11. Rehefa tsy ampiasaina dia tahirizo ao anaty vata misy azy io saribakoly silikôly io ary tsy maintsy apetraka amin'ny toerana marindrano izy ireo miaraka amin'ny mahitsy rehetra. Halaviro ny fepetra mangatsiaka be loatra sy mitahiry be loatra.
Teo aloha: 180cm sinoa lahy lahy sy vavy lahy sy vavy saribakoly olon-dehibe silika saribakoly silikôla firaisana ara-nofo tena izy ho an'ny vehivavy
Manaraka: 172cm Fat Sex Doll Saribakoly Fitiavana Japoney feno satroka H be tratra matavy boriky tena fitiavana saribakoly ho an'ny lehilahy
Silika malefaka malefaka azo itoviana lahy sy vavy ...